Ithetha ntoni iYin kunye neYang? Zithini iiMvelaphi zoPhawu? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ithetha ntoni iYin kunye neYang? Kwaye Zithini Imvelaphi Yophawu?
Isimboli se-yin ne-yang siyaziwa kakuhle, kodwa ithini imbali yayo kwaye iyintoni kanye kanye? Yintoni ifilosofi kunye nenkcazo ye-yin ne-yang?
Xa sicinga ngefilosofi kunye neenkolelo ezivela eMpuma, sihlala sicinga ngesimboli esaziwayo seYin neYang. Le ngcamango imelwe ngumbuthano owaziwayo omnyama nomhlophe, kodwa nangona sinokubona kangangezihlandlo ezingamakhulu, intsingiselo yawo ayisoloko icacile. Ke, sicinge ukuba ingumbono olungileyo ukujonga ukuba ivelaphi kwaye ithetha ntoni.
Ivela phi le ngcamango?
Simela ntoni isimboli?
Zihamba njani iinkosana zale ntanda-bulumko?
Isimboli kunye nentsingiselo ye-yin ne-yang ibuyela kwi-China yamandulo. Ngokwenyani isetyenziselwe zimele imikhosi echasayo nenincedayo ekhoyo kweli hlabathi.
Imvelaphi yeYin kunye neYang
Imbali yefilosofi yeYin kunye neYang ngelishwa ayaziwa kakhulu. Intsomi ithi ifilosofi yeYin Yang yavela kunye nomcinga waseTshayina uZou Yan ngekhulu lesi-3 BC. Le yokugqibela iqhotyoshelwe kwisikolo saseYin naseYang. Iya kuba nefuthe kuphuhliso lobuTao e-Asiya nakwisayensi. Akumangalisi ke ukubona ukuba uphawu ifumaneka kwenye yeencwadi ezindala zamayeza amaTshayina, i Huangdi Nei Jing Suwen. Njengophawu oludala, luye lwasinda ukutyhubela iinkulungwane ngaphandle kokuphulukana nentsingiselo yalo kwindalo iphela.
I-Yin ne-Yang luphawu lokuvisisana
I-Yin Yang yenziwe ngamacandelo amabini: indawo emnyama enamachaphaza amhlophe ekujikelezeni kwayo kunye nenxalenye emhlophe enechaphaza elimnyama ekujikelezeni kwayo, konke kwisangqa. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba umbono wale mbono uqondwa uwonke; Oko kukuthi ayinakubakho ngaphandle kwesangqa. Ewe kunjalo, icandelo elimnyama, icandelo elimhlophe kunye namanqaku onke ayinto enye. Masenze isigqibo kunye kunye neesimboli eziyilaleyo.
- Isangqa sibonisa indalo esihlala kuyo. -
Isangqa, uphawu lwehlabathi
Okokuqala, isangqa sibonisa indalo esihlala kuyo. Indalo iphela ishukunyiswa yimikhosi echaseneyo, ethi ngokwahlukileyo, iyenze iguquke. Isangqa emva koko sibonisa ukuhamba okungapheliyo kwehlabathi, ngenxa yamandla, amacandelo amabini amnyama namhlophe. Yin Yang ke kufuneka athathelwe ingqalelo njengobulumko bobomi ekuhambeni.
Ingaphakathi lesangqa, lijoyina ezimbini ezichaseneyo nangaphezulu kwawo onke amacala adibeneyo
I-Yin kunye neYang kufuneka zithathwe njengezinto ezipheleleyo. Ngokwe-cosmology yaseTshayina, i-Yin, (icandelo elimnyama) linxulunyaniswa ubumnyama, amanzi nemilambo. Kumhlaba jikelele, siyayibona njengengalunganga. Icala elimhlophe kwelinye icala lihle ngakumbi. Ewe kunjalo, iYang, inxulunyaniswa ukukhanya, ilanga nomhlaba.
Inxalenye emhlophe Ubudoda
Amachaphaza amnyama amhlophe amhlophe asikhumbuza ukuba 'izinto azisoloko zimnyama zonke okanye zimhlophe zonke'. Ibhalansi yehlabathi ifuna omabini amacandelo umbono.
Ihamba njani iYin kunye neYang yonke imihla?
I-Yin ne-Yang inokufumaneka kwizinto ezininzi zobomi bethu bemihla ngemihla:
Amaphandle kunye nesixeko;
Uvuyo nosizi, njl.
Yonke imihla imizekeliso mininzi kwaye ithatha iindlela ezininzi. Kumhlobiso umzekelo, iYin kunye neYang zezinye zeziseko zeFeng Shui; indlela yokuhombisa ekhokelela kwintlalo-ntle ekhaya.
'Umntu akanakubona ukukhanya ngaphandle kwesithunzi, umntu akanakubona ukuthula ngaphandle kwengxolo, akanakufumana ubulumko ngaphandle kobudenge.'
- UCarl Gustav Jung
Ukusebenzisa olu phawu kwindalo iphela, kwaye ukuyibamba iyonke, iifom zayo, izichasi zayo, njl. Siphakamisa ukuba Yin Yang mandala.
Into ebalulekileyo kukuqonda ukuba ifilosofi I-Yin ne-Yang imema wonke umntu ukuba afumane ibhalansi, ngakumbi ibhalansi yangaphakathi kunye neyomntu eyenziwe ngamandla ethu angaphakathi. Kungokubadibanisa ukuze sifike kuzolile.
Ukuba uwonwabele la manqaku, jonga umxholo olandelayo;
Intsingiselo kunye nemiyalezo yamadangatye ekhandlela ahlukeneyo
Umyalezo wokomoya kunye nophawu lweentaka ezahlukeneyo
Inani leengelosi kunye neeyure zesipili
Ukubona iYure ezingama-21: 12 eziGuquliweyo zeMirror luphawu lokuChwetheza iingcinga eziqinisekileyo
Ukuhambelana kukaLeo: Loluphi uphawu lweZodiac olwenzelwe wena?
Ngaba i-sagittarius kunye ne-virgo iyahambelana
i-mercury ekubuyiseni kwakhona imihla ye-2019
ndihlala ndibona i-999
kangaphi i-mercury kwi-retrograde